Jubaland oo baaq u dirtay dalal "faragelin" ku haya arrimaha Soomaaliya
Jubaland oo baaq u dirtay dalal "faragelin" ku haya Soomaaliya
By Madaxtooyada Jubaland
KISMAAYO, Jubaland - Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay kal-fadhiga labaad ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in dhaqaalaha la kobciyay iyadoo Wasaarada iyo hay'adaha kala duwan ee dakhligu ay xooga saareen sidii loo midayn lahaa dakhliga guud taas oo guulo la taaban karo laga gaaray isagoo xusay in ay qayb ka tahay hanaanka lagu hufayo nidaamka maaliyada Jubbaland.
sidoo kale waxaa Madaxweynahu uu sheegay in Arimaha amaanka hormar badan laga sameeyay iyadoo Ciidamada iyo Hay'adaha amaanku ay wadaan dadaal adag oo lagu xorayno deegaanada maqan taasna shacabku ay door muuqda ku leeyahiin.
Arimaha dhulka ayuu Madaxweynahu sheegay in hay'ad gaar ah loo sameeyay taas oo xal ka gaarta muranada dhulka sidoo kalana bixisa ruqsadaha lahaanshaha dhulka oo nidaamka iyo xeerarka caalamiga ah waafaqsan.
Madaxweynahu wuxuu u sheegay Dowlada Federaalka ah inay Ciidamadeeda si shuruud la'aan ah ugala baxdo Gobolka isagoo intaas raaciyay in Ciidamada halkaas la geeyay ay joojiyaan dhibaatada ay dadka shacabka ah ku hayaan.
Madaxweynahu wuxuu ugu baaqay hay'adaha gargaarka inay kaalmo deg deg ah lasoo gaaran dadka shacabka ah ee deegaanada daawo ee Gobolka Gedo ku barakacay.
Arimaha Doorashooyinka iyo dhamaystirka Dastuurka ayuu Madaxweynahu sheegay in aanay waxba ka soconaynin hadii aanay go'aan ku lahaanin Dowlada Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka ah iyo dhinacyada ku lugta leh isagoo sidoo kale sheegay in Barnaamijka Deyn cafinta oo mudo soo socday ay diyaar u tahay Jubbaland sidii guul looga gaari lahaa lakiin loo baahan yahay in Dowladaha deeqda ku bixiya Soomaaliya ay ka fiirsadaan waxyaabaha loo adeegsado lacagaha ay Soomaalida siiyaan oo dib loogu burburiyo hanaankii Federaalka ahaa ee dalka dib u dhiskiisa waxbadan ka taray.
MUUQAALKA AXMED MADOOBE
Madaxweynaha Jubaland ayaa gudoomiyey shirka todobaadlaha ee golaha wasiiradda maamulkiisa.
Jubaland iyo Beesha Caalamka oo ka wada-hadlay hiigsiga 2020/22
Soomaliya 17.12.2019. 16:04
Jubaland oo xilka ka qaadey mas'uuliyiin u socdaalay Muqdisho
Soomaliya 15.12.2019. 14:04
Axmed Madoobe oo baaq kasoo saarey fatahaadaha ka dhacay Dalka
Soomaliya 30.04.2020. 09:35
Axmed Madoobe oo "diidey" dalab lacageed oo DF u soo bandhigtay
Soomaliya 07.03.2020. 14:00